“Waxay noqon doontaa niyadjab haddii ay Liverpool sidan ugu guuleysato Premier League” – Van Dijk – Gool FM
Dajiye March 16, 2020
(Liverpool) 16 Mar 2020. Daafaca kooxda kubadda cagta Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa muujiyay dareenkiisa ah in Reds ay ku guuleysato koobka horyaalka Premier League iyadoo aysan la joogin raageerayaashooda.
Virgil van Dijk ayaa carabka ku adkeeyay in haddii Liverpool loogu caleemo saaro koobka horyaalka Premier League garoon taageero la’aan ah ay noqon doonto niyadjab aad u weyn.
Shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Virgil van Dijk waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Haddii aan horyaalka ku guuleysano garoon maran oo taageerayaasheena aysan joogin, waxaan dareemi doonaa niyadjab aad u weyn”.
“Qofna ma dooneyso inay ciyaarto iyadoo aysan la joogin taageerayaasheeda”.
Si kastaba ha noqotee, Maamulka Premier League ayaa wuxuu si ku meel gaar ah u joojiyay kulamada horyaalka ilaa iyo bisha April, kaddib markii la shaaciyay inuu haleelay macalinka kooxda Arsenal ee Mikel Arteta iyo weeraryahanka Chelsea ee Callum Hudson-Odoi.
RASMI: Brazil oo xannibtay guud ahaan tartammada kubadda cagta ee dalkeeda